Home>Our Services>Ny fitaterana làlana iraisam-pirenena>Fitaterana an-dalambe any Mongolia
Ento amin'ny Sohologistics ny entanao manerana an'i Chine dia ento mankany Mongolia amin'ny alàlan'ny seranan-tsambon'i Erlianhot, Ceke, Ganqi Maodu, Zhuengadabuqi, Azharat, Mandala, Ebudug, Alshan, seranan-tsambo Bagmodu miaraka amina kamio fitoerana na kamio manokana hafa.
Inona avy ireo karazan-tsakafo mety ho an'ny fiara fitaterana làlana iraisam-pirenena mankany Mongolia?
A. Ny halavany na ny halavan'ny entana dia mihoatra ny halehiben'ilay fitoeran-javatra ary mihoatra ny fetran'ny gara isaky ny metatra toradroa misy cargos mavesatra.
B.Railway station izay tsy misy ny serivisy fanofana boaty.
C.Cargos dia mitaky fahatsiarovan-tena lehibe raha ny fitaterana lalamby dia tsy afaka manome antoka ny tsingerin'ny fitaterana noho ny fitarihan'ny fiaran-dalamby sy ny fotoana fitaterana.
Ahoana ny fomba hanatanterahana ny fanambarana momba ny fomba amam-panao, ny famindrana ny fomba amam-panao ary ny fahazoan-dàlana amin'ny fomba fitaterana làlana iraisam-pirenena mankany Mongolia?
A. Ny fitaterana an-dalambe mankany Mongolia dia ny hanatanterahina ny fanambarana fanondranana araka ny fampahalalana mifandraika amin'ny fiara fitaterana vahiny sy ny fomba amam-panao eo an-toerana rehefa avy mitondra entana eny an-tsena vahiny ao amin'ny trano fitehirizam-bokatra.
B. Ny fitaterana ny fitaterana an-dàlana mankany Mongolia dia nambara tany amin'ireo firenena teny an-dalana.
C.Ny fitaterana làlana mankany Mongolia dia azo ambara ao amin'ny seranan-tsoranan'ny fahazoan-dàlana amin'ny fahazoan-dàlana na amin'ny toerana misy ny tetikasa.
Iza no mampiasa ny fitaterana làlana iraisam-pirenena mankany Mongolia?
Ahoana ny momba ny volavolan-dalàna famoahana ny fitaterana làlana iraisam-pirenena?